सुन काण्डमा शंका ,शाक्य बाबुछोरा फरार ? – Ganatantra Online
सुन काण्डमा शंका ,शाक्य बाबुछोरा फरार ?
शनिबार, बैशाख २८, २०७६ ६:५३:४७
दाङ, वैशाख २८ । सुन काण्डले दाङको बजार तातेको छ । चोरी गरेको सुन किनेको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले केहि व्यवसायीहरुलाई पक्राउ गरेपछि जिल्लाका व्यवसायीहरु आन्दोलित बनेका छन् । चोरबाट सुन किन्नेलाई प्रहरीले उन्मुक्ति दिएर कालिगढबाट सुन किन्नेलाई पक्राउ गरेकोमा असन्तुष्टि जनाएका छन् । दोषीलाई छोड्ने र निर्दोषलाई पक्राउ गरेर राख्ने काम गरेको भन्दै प्रहरीप्रति सुन व्यवसायीहरु आक्रोशित भएका छन् ।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघ दाङका अध्यक्ष विनोदकुमार विश्वकर्माका अनुसार सिधै चोरबाट ठुलो मात्रामा सुन किन्ने घोराही उपमहानगरपालिका १५ न्यरोडमा रहेको शाक्य गहना पसलका सञ्चालक हेमराज शाक्य र उनका छोरा शुभाष शाक्यलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर छोडेको छ भने उनीहरु अहिले फरार छन् । तर कालिगढबाट सुन किन्ने घोराहीका तीन जना व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर १५ दिनदेखि हिरासतमा राखेको छ । सुनचाँदी व्यवसायीले आफ्ना कालिगढबाट महिनामा आधा तोलासम्म सुन किन्न मिल्ने बताउछन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ निबासी हिमा रावतको जाहेरीको अधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले घोराही १४ ट्राफिक नजिकै पुल्चोकमा बस्ने सद्धाम हुसेनलाई पक्राउ ग¥यो । हुसेनको साथबाट शाक्य गहना पसलबाट १ तोला ४०० ग्राम गलाएको सुन, सुनको सिक्री १ थान, सुनको औठी १ थान प्रहरीले बरामद ग¥यो । तर जाहेरीमा उल्लेख भए अनुसार अन्य सुन फेला नपरेपछि हुसेनले शाक्य गहना पसलमा विक्रि गरेको बताए । त्यसपछि शाक्य गहना पसल घोराहीका सञ्चालक हेमराज शाक्यलाई प्रहरीले पक्राउ ग¥यो । अभियुक्त हुसेनकै बयान अनुसार हेमराजका छोरा सुभाष शाक्यलाई पनि प्रहरीले पक्राउ ग¥यो तर अर्को दिन हिरा ग¥यो ।
पक्राउ परेका हुसेनले घोराहीका अन्य व्यवसायीहरुलाई समेत सुन विक्रि गरेको बयान दिए । प्रहरीका अनुसार कालिगढ अमर थापाले हुसेनसंग सुन लिएर गाल्ने र घोराहीका व्यवसायीहरुलाई विक्रि गर्ने गरेको पाईयो । नेपालगंज घर भई ५ वर्षदेखि घोराहीको बैंक रोडमा एउटा कोठा भाडामा दिएर सुनको कालिगढ पेशा गर्दै आएका अमर थापालाई पक्राउ ग¥यो । थापाले हुसेनसँग सुन लिएर घोराहीका तीन जना व्यवसायीलाई बेचेको प्रहरीले बताउछ ।
हुसेन र थापाकै बयानका आधारमा घोराहीको राधिका सुनचाँदी पसलका सञ्चालक ७४ वर्षिय डम्बरलाल विश्वकर्मा, न्यू पाल्पा भैरव सुनचाँदी पसलका सञ्चालक ४५ वर्षिय पुनलाल गहतराज र न्यू दिपिका सुनचाँदी पसलका सञ्चालक ३१ बर्षिय गोमानसिंह सुनारलाई पक्राउ गरेको छ । थापाबाट विश्वकर्माले १० लाल, गहतराजले २० लाल र सुनारले १८ लाल ढिक्का सुन किनेको सुन व्यवसायीहरुले बताउछन् ।
शाक्य बाबुछोरा फरार ?
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले शाक्य गहना पसलका सञ्चालक हेमराज शाक्य र उनका छोरा शुभाष शाक्य फरारको सुचीमा राखेको छ । प्रहरीले वैशाख ८ गते हेमराजलाई र ९ गते छोरा शुभाषलाई जिल्ल प्रहरी कार्यालयमा बोलाएर सोधपुछ गरिएको तर नियन्त्रणमा नराखेको प्रहरी नायव उपरिक्षक विनोद विक्रम शाहले बताउनुभयो ।
तर प्रहरी अनुसन्धानमा उनीहरु दोषी ठहरिएपछि पक्राउ पुर्जी जारी भए लगत्तै उनीहरु फरार रहेको उहाँको भनाई छ । शाहका अनुसार अहिले मुद्धा अदालतमा पुगिसकेको र शाक्यका बाबुछोरालाई पनि मुद्धा दायर गरिसकेको छ । उनीहरुको खोजी कार्य चलिरहेको प्रहरी नायव उपरिक्षक शाहले बताउनुभयो ।
सुन व्यवसायीको असन्तुष्टि
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका विभिन्न जिल्ला र प्रदेशका पदाधिकारीहरु अहिले घोराहीमा छन् । देशभरका सुनचाँदी व्यवसायीहरु आतंकित पार्ने गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङले गतिविधिहरु सुरु गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । चोरसँग सिधै सुन किन्ने शाक्य गहना पसलका सञ्चालकलाई छोड्नु प्रहरीमाथि नै शंकाको विषय बनेको उनीहरुले बताउछन् ।
‘नियम अनुसार चोरबाट सुन किन्ने पनि दोषी हो, तर प्रमुख दोषी शाक्य गहना पसलका सञ्चालकलाई प्रहरीले छोडेको छ, तर आफ्नै कालिगढबाट सुन किन्ने दोषी हैन, तर उनीहरुलाई प्रहरीले समातेको छ । यो आपत्तीजनक कार्य हो ।’ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी संघका प्रदेश नं. पाँचका संयोजक तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष प्रेम सेन्चुरीले प्रहरीको यस्तो गतिविधिले व्यवसायीहरु आतंकित महसुस गरेको बताउनुभयो ।
‘हामीले व्यवहारिक जीवनलाई ख्याल गर्दै कालिगढलाई ज्याला स्वरुप सुन नै दिने गरेका छौँ, त्यो सुन भनेको अत्यन्तै न्यून हुन्छ, त्यो सुन पसल सञ्चालक र कालिगढको विचमा किन्ने र बेच्ने क्रम चलिरहन्छ ।’ सेन्चुरीले भन्नुभयो, ‘वर्षौदेखि चलिआएको परम्परालाई प्रहरीले अचानक दोषी बनाउनु सह्य विषय हैन ।’ अर्को केन्द्रीय उपाध्यक्ष अर्जुन रसाईलीले बार्षिक ४० अर्व रुपैयाँको कारोबार गरेर बार्षिक १३ वर्ष कर तिर्ने सुनचाँदी व्यवसायीलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
सुनचाँदी व्यवसायीहरुले मुद्धाको विषयमा जानकारी लिन खोज्न प्रहरी कार्यालय भित्र पस्न नदिएको, अभद्र व्यवहार गरेको बताए । नागरिकलाई सम्मान गर्न नसक्ने प्रहरीले न्याय दिन नसक्ने रसाईलीले बताउनुभयो ।